ကလေးမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးသလား | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ပထမကလေးလေးက အသက် ၂၄ လမှာတင် စကားကို အပြည့်အစုံ ပြောနေပြီပေမယ့် ဒုတိယကလေးလေးကတော့ မပြောသေးဘူးလား။ စကားလုံးတွေ မပြောသေးဘဲ ဝူးဝူးဝါးဝါး လုပ်တုန်းလား။
ကလေးတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူနိုင်တာသိပေမယ့် ဒါကတော့ သိပ်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ခံစားမိနေပါသလား။
** စောင့်ကြည့်ရမယ့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမှတ်တိုင်များ : လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ ဆော့ကစားခြင်း **
ကလေးရဲ့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ လှုပ်ရှားလုပ်ကိုင်မှုအရည်အသွေး၊ ဘာသာစကားပြောဆိုမှုအရည်အသွေးနဲ့ ဆက်ဆံမှုအရည်အသွေးတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ကလေးကို ယေဘုယျကြည့်လိုက်ရင် ပုံမှန်လို့ ထင်ချင်စရာရှိပေမယ့် သတိထားရမယ့် အကြောင်းရင်းသေးသေးလေးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။
ကလေးလေးဟာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု ပုံမှန်အတွင်းမှာ သက်ရောက်သလားဆိုတာကို ဒီစံနှုန်းတွေနဲ့ ကြည့်ကြည့်ပါ။ အခုပြထားတာတွေဟာ ပျမ်းမျှစံနှုန်းတွေပဲဖြစ်တာမို့ ကလေးဟာ ဒီစံနှုန်းတွေထက် ရှေ့ရောက်နေတာ၊ ဒါမှမဟုတ် နောက်ကျနေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
● ၂-၄လအတွင်း : စပြီးပြုံးနေ၊ ရယ်နေပါပြီ။
● ၆ လ : ဝူးဝူးဝါးဝါး စပြီးစကားပြောနေပါပြီ။
● ၁၂ လ : စကားလုံးတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဆက်စပ်နေနိုင်ပါပြီ။ (ဥပမာအားဖြင့် ဘောလုံးဘယ်မှာလဲဆိုရင် ဘောလုံးကို လိုက်ရှာတာမျိုးပေါ့)
● ၁၅ လ : ပထမဆုံးစကားလုံးကို စပြောပါပြီ။ အနည်းဆုံး ၄ လုံးကနေ ၆ လုံးလောက်ထိ ပြောနိုင်ပါပြီ။
● ၁၈ လ : အခြေခံကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေကို သိနေ၊ ညွှန်ပြနေနိုင်ပါပြီ။
● ၂၄ လ : စာလုံးအလုံး ၅၀ လောက် အနည်းဆုံးပြောနိုင်နေပြီး တချို့ ၂ လုံးတွဲတွေကိုပါ ပြောနိုင်နေပါပြီ။
>> အကယ်၍ ကလေးမှာ စကားနှောင့်နှေးမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်
ဒီလိုနှောင့်နှေးနေတာဟာ ကြီးထွားမှုနှောင့်နှေးနေတာ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါ။ နားအကြားအာရုံ မကောင်းရင်လည်း စကားနှောင့်နှေးမှုရှိနိုင်တာမို့ စကားပြောရော နားအကြားအာရုံကိုပါ စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။
ဒီလို စကားပြော နှောင့်နှေးတာဟာ ကလေးအတွက် ပြောဆိုဆက်ဆံရေး ခက်ခဲစေတာမို့ ကလေးမှာ လိုချင်တာမရတိုင်း ဒေါသထွက်တာ၊ အပြုအမူအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကလေးတွေအတွက် စကားပြောလေ့ကျင့်ခန်းတွေက ကလေးဘဝအတွက် အပြောင်းအလဲဖြစ်စေပါတယ်။
Nutrilin IA 1
● ၂ လမတိုင်မီ : စပြီးပြုံးပြနေပါပြီ။
● ၂-၄ လ : စတင်ရယ်ပြနေပါပြီ။
● ၆ လ : မှန်ထဲက ိုယ့်ဟာကိုယ်ကြည့်ပြီး ရယ်ပြတတ်နေပါပြီ။
● ၉ လ : လူစိမ်းမြင်ရင် ကြောက်တတ်လာပါပြီ။
● ၁၂ လ : လိုချင်တာလေးကို လက်ညှိုးတစ်ညွှန်ညွှန် လုပ်တတ်ပါပြီ။
● ၁၈-၂၄ လ : မျက်လုံးချင်း ဆုံကြည့်တတ်လာပြီး တခြားကလေးတစ်ယောက်နဲ့အပြိုင် ဆော့တတ်လာပါပြီ။
● ၂၄ လနောက်ပိုင်း : တခြားကလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူ ဆော့ကစားတတ်လာပါပြီ။
>> အကယ်၍ ကလေးမှာ လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးမှုရှိနေခဲ့ရင်
အပေါ်စီးကနေ အားလုံးကို ခြုံကြည့်ပါလို့ ဆိုပါတယ်။ ကလေးဟာ အိမ်မှာပဲနေရတယ်၊ တခြားကလေးတွေနဲ့ ဆက်သွယ်မှုလည်းမရှိဘူးဆိုရင် မူကြိုတက်ချိန် ရောက်တဲ့အခါမှာလည်း သိပ်ပြီး ဆက်ဆံပေါင်းသင်းတတ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေး ချို့ယွင်းနေတာမဟုတ်ဘဲ တခြားကလေးနဲ့ မဆက်သွယ်တတ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ လိုနေတာပါ။
တစ်ခါတလေကျတော့ ကလေးဟာ စကားပြော နောက်ကျနေတာမို့ ကောင်းကောင်းဆက်သွယ်မရတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးမှာလည်း စကားပြောလေ့ကျင့်ပေးတာက ကလေးရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ အကျိုးရှိပါတယ်။
Nutrilin IA 2
● ၆ လ : ဘေးကိုလှိမ့်ပြီး အထိန်းနဲ့ ထိုင်တတ်ပါပြီ။
● ၉ လ : အထိန်းမပါဘဲထိုင်နိုင်ပြီး လှမ်းယူတာ၊ တွားသွားတာမျိုး လုပ်တတ်နေပါပြီ။
● ၁၅ လ : လမ်းလျှောက်နိုင်ပါပြီ။ (တချို့ကလေးတွေမှာ လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တစ်ချိန်လုံး ချီပိုးထားတာမို့ နောက်ကျနေတာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။)
>> ကလေးမှာ လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးနေခဲ့ရင်
ကလေးကို လှုပ်ရှားဖို့ ပိုမိုအခွင့်အလမ်းတွေ ပေးရပါမယ်။ လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ ဇွန်းကိုင်တာလိုမျိုး အနုစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ လမ်းလျှောက်တာလိုမျိုး အကြမ်းစားလှုပ်ရှားမှုတွေကို လေ့ကျင့်ပေးလို့ရပါတယ်။
စောစောစီးစီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ရင် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကို ဟန့်တားနိုင်ပါတယ်။
စောစောစီးစီး သိရှိလေ့ကျင့်ပေးနိုင်ရင် ကလေးရဲ့အနာဂတ်မှာ နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်တွေကို အလွယ်တကူ ရောက်နိုင်လာမှာပါ။ ဒီ့ထက် လိုအပ်လာခဲ့ရင် ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ အမူအကျင့် အထူးကုဆရာဝန်ဆီကို လွှဲပြောင်းပြသနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေ ငယ်စဉ်ဘဝမှာ အချိန်တိုအတွင်း အများကြီး လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ကျမှ သိတာထက် စောစောသိပြီး စောစောကုသနိုင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဆရာဝန်ရက်ချိန်း သွားပြတဲ့အခါ ဒီရက်ချိန်းနဲ့ နောက်ရက်ချိန်းကြားမှာ ဘယ်အချက်တွေကို သေချာဂရုစိုက်ကြည့်ရမလဲဆိုတာကို ဆရာဝန်က မှာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုကြည့်နေရင်း ကြားထဲ တစ်ခုခု သင်္ကာမကင်းဖြစ်ရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြန်ဆက်သွယ်ဖို့ လိုပါတယ်။
၂ဝ.၁ဝ.၂ဝ၂၁ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
သူတို့ကြိုက်တဲ့ဟင်းမပါရင် မစားဘဲ ဆန္ဒပြတတ်ကြတဲ့ကလေးလေးတွေ အိမ်မှာရှိကြလား? များသောအားဖြင့်တော့ နာရီပိုင်းလောက်အကြာ ဗိုက်မခံမရပ်နိုင်အောင် ဆာလာတဲ့အခါမှာတော့ စားပွဲမှာပြန်လာထိုင်စားတာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီထက်ပိုကြာလာရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?
ကြီးထွားနေတဲ့အရွယ် ကလေးတွေအဖို့ အစားမစားဘဲ အကြာကြီး...
ကလေးတွေဟာ ဉာဏ်ကောင်းရုံနဲ့ လုံလောက်ပြီလား
ဦးနှောက်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပရော်ဖက်ဆာတစ်ဦးက ကလေးတွေကို ဉာဏ်ကောင်းလိုက်တာ ဆိုတဲ့ ချီးကျူးစကားကို မပြောသင့်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဉာဏ်ကောင်းလိုက်တာလို့ အချီးကျူးခံရတဲ့အခါ ကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီး ရယူစရာမလိုဘဲ သူ့မှာနဂိုရှိပြီးသားအရာတစ်ခုလို့ မှတ်ယူသွားတတ်ကြလို့ပါပဲ။